အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန်အတွက် တွင် မြန်မာ - 291 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
တွင် မြန်မာ ငှားရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေများ
・FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 291 အိမ်ခြံမြေများ
Virtual 3D tours of မြန်မာ အိမ်ခြံမြေများ
ရန်ကင်း, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
43370,761 စတုရန်းပေ
4 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4 Bedroom House for rent in Mayangone, Yangon
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
454,050 စတုရန်းပေ
15 Bedroom House for rent in Yankin, Yangon
15 16 4,000 စတုရန်းပေ
15 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3 Bedroom House for rent in Mayangone, Yangon
322,500 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
7 8 3,000 စတုရန်းပေ
7 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
447,247 စတုရန်းပေ
768,000 စတုရန်းပေ
Don't miss out! Get notified when new အိမ်ခြံမြေများ are listed တွင် မြန်မာ
3 Bedroom House for rent in Yangon
564,900 စတုရန်းပေ
7 Bedroom House for rent in Bahan, Yangon
778,395 စတုရန်းပေ
6 Bedroom House for rent in Mayangone, Yangon
655,000 စတုရန်းပေ
666,000 စတုရန်းပေ
9 Bedroom House for rent in Yangon
965,000 စတုရန်းပေ
9 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4 Bedroom House for rent in Bwet Kyi, Yangon
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်, မြောက်ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
424,800 စတုရန်းပေ
4 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in မြောက်ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
We verify all အိမ်ခြံမြေများ listed တွင် မြန်မာ on FazWaz
သင်္ဃန်းကျွန်း, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
332,400 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
6 Bedroom House for rent in Insein, Yangon
ကော့မှုး, မြောက်ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
621,500 စတုရန်းပေ
6 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in မြောက်ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3 Bedroom House for rent in Bahan, Yangon
335,000 စတုရန်းပေ
4 Bedroom House for rent in Thingangyun, Yangon
445,600 စတုရန်းပေ
လှိုင်သာယာ, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
676,000 စတုရန်းပေ
462,800 စတုရန်းပေ
South Okkalapa, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
444,500 စတုရန်းပေ
4 Bedroom House for rent in Bahan, Yangon
ကော့မှုး, အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
463,200 စတုရန်းပေ
554,000 စတုရန်းပေ
774,000 စတုရန်းပေ
434,200 စတုရန်းပေ
668,000 စတုရန်းပေ
8 Bedroom House for rent in Mayangone, Yangon
866,500 စတုရန်းပေ
16 Bedroom House for rent in Mayangone, Yangon
16715,000 စတုရန်းပေ
16 အိပ်ခန်း အိမ် for rent in အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်), ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
555,000 စတုရန်းပေ
1 - 30 ၏ 291 အဖြေများ
မြန်မာ ၏ အိမ်နီးချင်းများကို ဖော်ထုတ်ပါ
သင့်အတွက် 258 အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း :6သိန်း - 302 သိန်း
သင့်အတွက် 14 အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း : 18 သိန်း - 70 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 10 သိန်း - 35 သိန်း
သင့်အတွက်5အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရမ်းခြင်း : 40 သိန်း - 246 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 30 သိန်း - 93 သိန်း
ငှားရမ်းခြင်း : 60 သိန်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟုတရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သောမြန်မာနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ လာအို၊ ထိုင်းနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ 67ရိယာ ၆၇၆၅၇၈ တွင်အရှေ့တောင်အာရှ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်သည်တောက်ပသောစေတီပုထိုးများကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရွှေတိဂုံဘုရားသည်တိုင်းပြည်၏အကျော်ကြားဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာ ငှးရမ်းခ ဈေးကွက် ပုံစံများ
မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်တွင် နောက်ဆုံး ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများကို ရှာပါ။
မြန်မာ တွင် နေထိုင်ခြင်းအတွက် အားထုတ်နိုင်စွမ်း
မြန်မာ တွင် ငှားရမ်းနိုင်သော အိမ်များအတွက် လစဉ်ငှားရမ်းခ အလယ်အလတ်သည် 42 သိန်း ဖြစ်သည်။ The median monthly rent per square feet in မြန်မာ is0သိန်း ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာ တွင် 291 အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန် ရရှိနိုင်သည်။
လူ ဦး ရေ ၅၄ သန်းကျော်သောမြန်မာနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်အာရှ၏လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၅ သန်းကျော်သည်၎င်း၏မြို့တော်ဟောင်းရန်ကုန် (လူသိများသောရန်ကုန်) တွင်နေထိုင်ကြပြီးလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနှင့်မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၊ ရွှေစေတီမြန်မာနှင့်မြို့၏မူလနေရာသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်သည်မီတာ ၁၀၀ အမြင့်တွင်တည်ရှိပြီး ၆ ရာစုမှစတင်ကာတိုင်းပြည်၏သမိုင်းတွင်ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။ စေတီတော်တစ်လုံးလုံးကိုစိန်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စေတီပုထိုးများအပြင်ရန်ကုန်သည်၎င်း၏မြို့တော်အဖြစ်လူသိများသည်။
၉ ရာစုမှ ၁၃ ရာစုအတွင်းပုဂံ၏မြို့တော်အဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့သောပုဂံရှိဘုရားကျောင်း ၂၀၀၀ ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်လူအများစုကမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ကြသည်။ ဤရှေးဟောင်းမြို့တော်ကိုယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးယင်း၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအများစုကိုပုဂံရှေးဟောင်းသုတေသနဇုန်အတွင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ itors ည့်သည်များသည်ဘုရားကျောင်းများကိုခြေလျင်၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ကားမောင်းသူကိုငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပူဖောင်းပူဖောင်းမှထွက်ခွာသွားခြင်းများကိုနှစ်သက်ကြသည်။
သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရှုခင်းများအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသည်သဘာဝအလှအပကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သည်။ တိုင်းပြည်၏ကမ်းရိုးတန်းကိုခံစားလိုသူများသည်များသောအားဖြင့်ငပလီကမ်းခြေသို့သွားကြသည်။ လူအများစုတို့သည်ကမ်းခြေပေါ်တွင်အနားယူခြင်း၊ နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်းနှင့်အရသာရှိလှသည့်ပင်လယ်လတ်ဆတ်သောစားသောက်ဆိုင်များကိုစားသောက်ဆိုင်များစွာတွင်ပျော်မွေ့နိုင်သောနိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးကမ်းခြေဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားသားများငှားရမ်းရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်းများနှင့်အိမ်များသည်တိုင်းပြည်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်အတွင်းရှိကွန်ဒိုများသည်များသောအားဖြင့် ပို၍ အဆင့်မြင့်ပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာများ, ရေကူးကန်, ဥယျာဉ်, ကလေးကစားကွင်း, 24 နာရီလုံခြုံရေးစနစ်များနှင့်သတ်မှတ်ထားသောယာဉ်ရပ်နားနေရာများအဖြစ်ခေတ်သစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများပေး။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်မြေညီထပ်တွင်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်များရှိပြီးငှားရမ်းသူများကိုအဆင်ပြေသောဘဝပုံစံကိုပေးသည်။
တိုက်ခန်းများသည်ကွန်ဒိုများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်ကွန်ဒိုများကဲ့သို့ဇိမ်ခံကားများမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကားရပ်နားရန်နေရာများနှင့် ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးစနစ်များပါ ၀ င်သည်။ စတိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သူတို့ကရိုးရာပုံစံဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းရှိလိမ့်မည်။ ရိုးရာပုံစံတိုက်ခန်းများသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးနိုင်ငံခြားသားများထက်ဒေသခံများကို ပို၍ နှစ်သက်ကြသည်။
ငှားရမ်းသူများသည်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းများတွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ဤတိုက်ခန်းအမျိုးအစားသည်ပုံမှန်တိုက်ခန်းများထက် ပို၍ ဇိမ်ကျကျသည်။ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံပါ ၀ င်သည့်ယူနစ်များ၊ ရေကူးကန်များ၊ အားကစားရုံများ၊ ကလပ်ခန်းမများ၊ အိမ်ငှားခြင်း၊ အခန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုစသည့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုငှားရမ်းသူများငှားရမ်းနိုင်သည်။ ဒါကငှားရမ်းသူတွေကိုဟိုတယ်လိုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပေးတယ်။
မြန်မာ ပျမ်းမျှငှားရမ်းခနှုန်းထားများ , အိမ်အရွယ်အစားဖြင့်
အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစား လစဉ် ပျမ်းမျှငှားရမ်းခ3အိပ်ခန်းများ (41 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 37 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (83 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 47 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (55 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 61 သိန်း6အိပ်ခန်းများ (32 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 85 သိန်း7အိပ်ခန်းများ (25 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 84 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် ၄၀% ခန့်ပိုမိုနိမ့်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ငှားရမ်းခများနှင့်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဖြစ်သည်။ သက်သောင့်သက်သာနေထိုင်နိုင်ရန်လူတစ် ဦး သည်တစ်လလျှင်အနည်းဆုံးကျပ် ၁,၉၀၀,၀၀၀ ၀ င်ငွေရရှိရန်လိုအပ်ပြီးမိသားစုမှမိသားစုတစ်စုလျှင်ကျပ် ၃,၃၀၀,၀၀၀ ခန့် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ခန့်) လိုအပ်သည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ (မြန်မာကျပ်ငွေ) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ပြီး ၁ ဒေါ်လာသည် ၁,၃၆၀ ကျပ်နှင့်ညီမျှသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ATM ကိုရှာခြင်းသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ နိုင်ငံတကာကဒ်များကိုလက်ခံသော ATM စက်များသည်နိုင်ငံအနှံ့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများတွင်ဖြစ်သည်။ အချို့သောခရီးသွားareasရိယာများတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလက်ခံသည်။ သို့သော်၊ သူတို့သည်အနိမ့်ကျဆုံးနှင့်ယူအက်စ်ဒေါ်လာအများဆုံးငွေတောင်းခံလွှာများကိုသာယူထားကြသဖြင့်သင်လဲလှယ်လိုသောငွေတောင်းခံလွှာများသည်အသစ်အဆန်းမပျက်စီးစေရန်သေချာစေပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများစွာရှိသော်လည်းအမျိုးသားဘာသာစကားသည်ဗမာဘာသာစကားဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလူ ဦး ရေအားလုံးနီးပါးကပြောဆိုကြသည်။ တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်သောလူအများစုသည်အနည်းဆုံးဘာသာစကား၏အခြေခံပညာဗဟုသုတရှိသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားသည်အချို့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနားလည်ရန်နားလည်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေ၏ ၉၀% ခန့်သည်ဤဘာသာတရားကိုစွဲကိုင်ထားကြသောကြောင့်ထေရ ၀ ါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံးဘာသာတရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်သူတို့၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုထင်ဟပ်စေသောနက်ရှိုင်းသောဗုဒ္ဓဘာသာအမြစ်တွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်အခြားအစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ၀ ိရဂရနဗုဒ္ဓနှင့် Animism အပါအဝင်အခြားဘာသာများကိုလည်းကျန်လူ ဦး ရေ၏ ၁၀% ကလွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးကြသည်။
တည်းခိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ခရီးသွားအထူးအထူးပြန်လည်ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းသည်မြန်မာပြည်တွင်ကာလရှည်ကြာနေထိုင်လိုသောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်လိုအပ်သည်။ နေထိုင်ခွင့်သည်ဝင်ခွင့်တစ်ခုသာသက်တမ်းရှိပြီးသုံးလမှတစ်နှစ်ကာလအထိထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သင်နေထိုင်နေစဉ်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာ။ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်သင်၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အပြင်ခရီးသွားအထူးအထူးဗီဇာထပ်မံယူရန်လိုအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ငှားရမ်းရန်အဓိကအကြောင်းရင်း ၄ ခု
1. စွန့်စားမှုနည်းပါးခြင်း - အဓိကစွန့်စားရသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာအစိုးရထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသည့်အခါအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်အရည်အချင်းမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငှားရမ်းခများသည်တိုင်းပြည်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများအတွက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
2. ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ် - မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးထားသည်ထက်ပိုမိုခက်ပြီးရှုပ်ထွေးသည်။ မကြာသေးမီကမြန်မာနိုင်ငံသည်ထိုင်းဥပဒေအပေါ်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အခြေခံသည့်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေကိုပြဌာန်းခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကွန်ဒိုမီနီယံတစ်ခုအတွင်းရှိနိုင်ငံခြားသား40ရိယာ၏ ၄၀% အထိနိုင်ငံခြားသားများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ သို့သော်ဥပဒေသည် ၂၀၁၆ အစောပိုင်းတွင်သာစတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကွန်ဒိုများစွာကိုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခက်ခဲသည်။
3. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပို - အိမ်ငှားတာဟာသင်ဟာတိုင်းပြည်မှာခေတ္တတည်းခိုဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းနေထိုင်နေတာမျိုးမလုပ်ရင်အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းခြင်းကပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေတယ်။ သင်၏ဘဝတွင်အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ မိသားစုကြီးထွားခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး နှင့်ပြproblemsနာများကဲ့သို့သောသင်၏အပြောင်းအလဲများဖြစ်ခဲ့ပါကအိမ်ငှားတစ် ဦး ကိုရှာရန်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းရောင်းရန်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲထွက်ခွာနိုင်သည်။
4. တာ ၀ န်ယူမှုလျော့နည်းခြင်း - ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဂရုစိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောတာ ၀ န်များစွာရှိသည်။ အိမ်ငှားခလုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်ရှင်ကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံတာတွေလုပ်ဖို့အနားယူပြီးအနားယူနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ တွင် အိမ်နီးချင်းများ
258 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
14 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
5 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အိမ်ခြံမြေ တွင် မြန်မာ
ဇိမ်ခံပစ္စည်း အိမ်ခြံမြေ တွင် မြန်မာ
တတ်နိုင်သေ အိမ်ခြံမြေ တွင် မြန်မာ